Ethiopia: 34 Qof Rayid Ah Oo Lagu Dilay Weerar Lagu Qaaday Bas – Heemaal News Network
Dabley hubeysan ayaa dad aad u tiro badan ku dishay weerar argagax leh oo lala beegsaday bas ay saarnaayeen dad shacab ah galbeedka Itoobiya, sida laga soo xigtay hay’adda xuquuqda aadanaha ee dalkaasi.
Hay’adda Xuquuqda Aadanaha ee Itoobiya (EHRC) ayaa bayaan ay soo saartay Axadii ku sheegtay in “qiyaasta tirada dhimashada, oo hadda ah 34, ay u badan tahay inay ka kororto” weerarkii ka dhacay habeenimadii Sabtida aaga muranku ka taagan yahay ee maamulka Benishangul-Gumuz.
Baskan rakaabka ah ee la weeraray ayaa ka ambabaxay magaalada Wonbera kuna sii jeeday dhinaca degaanka Chagni, waxana uu degaankan yahay mid ay dhawaanahan ka dhacayeen weeraro badan oo lagu hoobtay oo lala beegsaday dad rayid ah.
Madaxa EHRC Daniel Bekele ayaa ku booriyay mas’uuliyiinta gobolka iyo federaalka inay si wadajir ah uga shaqeeyaan qorshahii lagu badbaadin lahaa dadka rayidka ah ee gobolka Benishangul-Gumuz oo ah gobol ay si xawaare ah oo aan joogsi lahayn ay ku socdaan ee weerarada rayidka ka dhanka ah ee ka socda gobolka.
“Weerarkii ugu dambeeyay wuxuu sii kordhiyay halista ku soo wajacan bani’aadamnimada oo loo baahan yaay in si wada jir ah wax looga wada qabto,” ayuu yiri war ay hayadu barteeda bulshada ku baahisay.
Hayada ayaa waxa kale oo ay sheegtay inay jiraan warbixino kale oo sheegaya “weeraro” la mid ah kan, dad ka cararaya rabshadaha ka socda qaybaha kale ee gobolka, iyo sidoo kale “dadka barakacay una qaxaya sidii ay gabaad u raadsadan lahaayeen”.
Ma jirto cid sheegatay falkan iyo sidoo kale wax war ah oo la helay oo ku saabsan cidda falkaasi geysatay. Weerarka ayaa yimid iyadoo uu sii kordhayo khilaafka u dhexeeya dowladda Itoobiya iyo gobolka Tigreeyga ee woqooyiga dalka, colaadaas oo ay boqolaal dad ah ku dhinteen in ka badan 20,000 oo qof oo barakac ahna ay ka gudbeen xadka Suudaan.
Ma jiro ilaa hada wax xiriir ah oo la ogyahay oo ka dhexeeyo rabshadaha ka socda Benishangul-Gumuz iyo howl-galada militariga ee ka socda gobolka Tigray.
Dhinaca kale Siyaasiyiinta mucaaradka ayaa ku tilmaamay rabshadaha ka socda gobolka Benishangul-Gumuz kuwo qorshaysan oo salka ku haya isir-sifayn.
Mucaaridka ayaa si gaar ah farta ugu fiiqay inay jiraan weeraro qorshaysan oo maleeshiyaadka qoomiyada Gumuz ay ku beegsanayso dadka ka soo jeeda qowmiyadaha Amxaarada iyo Agew ee ku nool degaanka Metekel.
Kenya: Dhulbay Soomaliya Naga Haystaa, Waana In Xal Laga Gaaro Ka Hor Dacwada Badda